२ डेपुटी गभर्नरको लागी ढकाल, भट्ट, ढुङ्गाना र श्रेष्ठ सिफारिस - Aathikbazarnews.com २ डेपुटी गभर्नरको लागी ढकाल, भट्ट, ढुङ्गाना र श्रेष्ठ सिफारिस -
msc creative writing in uk help with job application cover letter put the following five steps of critical thinking in the correct order durham university creative writing phd richmond creative writing grade9gcse english creative writing university of new mexico mfa creative writing apply have you finished doing your homework yet law school personal statement writers phd creative writing nyc get someone to do your homework doing homework drunk reddit homework helpers key stage 1 father of the bride speech writing service creative writing masters lancaster personal statement paid help primary homework help co uk romans baths pay someone to do your homework primary homework help co uk britain creative writing interior design uc san diego mfa creative writing bdc business plan writer creative writing sea trinidad when was an essay concerning human understanding written cover letter help reddit creative writing teaching faint creative writing problems of learning creative writing derek was doing his homework on his computer application letter job order
नेपाल राष्ट्र बैंकमा २ डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल गत मंगलबार सकिएको थियो । बर्तामान सरकार धर्मराइरहेको अवस्थामा सरकारले चाडो डेपुटी गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मंगलबार कार्यकाल सकिएको डेपुटी गभर्नरको लागी बुधबारसाँझनै सिफारिस भएको बुझिएको छ ।
उता अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आफ्नो गृह जिल्ला बुटवलमा रहेका छन । उनि भोली मात्रै फर्किन पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेको छ । आजै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाएका छन । आगामी आइतबार २३ गते संसद पुर्नस्थापित पहिलो बैठक बस्ने तयारी छ । सो बैठकमा नेकपाकै प्रचण्ड माधव समुहले अविश्वासको प्रश्ताव ल्याउने तयारी पनि छ । सोही कारणले सरकारले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ती छिट्टै गर्ने तयारीमा छ ।
राष्ट्र बैंकमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ विदा भएपछि नयाँ डेपुटी गभर्नरका लागि ४ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ डेपुटी गभर्नरका लागि ४ जनाको नाम सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ । डेपुटी गभर्नरको लागी गभर्नरले लागि ४ जनाको नाम अर्थमन्त्री समक्ष सिफारिस गरेको स्रोतले बताएको छ । मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरेका हुन् ।
नयाँ डेपुटी गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रवक्ताको भुमिकामासमेत रहेका डा. गुणाकर भट्ट र राष्ट्र बैंक अनुशन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाको नाम सिफारिस भएको छ ।
गभर्नरले सिफारिस गरेको ४ जनाबाट मन्त्रिपरिषद्ले ५ वर्षे कार्यकालका लागि दुई डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ । नयाँ नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नर भविष्यमा गभर्नरको दावेदार पनि हुन् ।
चैतको किस्ता अन्तिममा गएर तिर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ
सनराइज बैंक लिमिटेडको नालामा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा
२७ औं महानिरीक्षकमा ठाकुर ज्ञवाली
माइक्रोफाइनान्सहरुको बम्पर लाभांश
पौड्याल सनराईज पुगेसंगै खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्यो
चन्द्रागिरी हिल्सले आईपिओ निष्काशनको माग गर्दे धितोपत्र बोर्डमा आवेदन..?